Fiarovam-pirenena: nanao dinikasa ny minisitera - ewa.mg
Fiarovam-pirenena: nanao dinikasa ny minisitera
News - Fiarovam-pirenena: nanao dinikasa ny minisitera
Ho fanamaivanana ny fiantraikan’ny
valanaretina covid-19, izay mifanaraka amin’ny drafi-panarenana
natolotry ny filoham-pirenena dia nodinihina teny amin’ny
fitalean’ny fanompoam-pirenena sy ny fiandry, omaly ny tetikasa
mety hahafahana manampy ny vahoaka. Nitarika izany ny minisitry ny
Fiarovam-pirenena ny Jly Rakotonirina Richard. Nanamafy ity
manamboninahitra ity fa taorian’ny fihibohana vokatry ny hamehana
ara-pahasalamana dia ity androany (omaly io) ity no fivoriana
voalohany niarahan’ny minisitry ny Fiarovam-pirenana tamin’ireo
mpiara-miasa aminy, izay nahitana ny sekretera jeneraly, ny
talen’ny kabinetra sy ireo tale isan-tsokajiny. Isan’ny tanjona
napetraka sy nodinihina tao anatin’ny tetikasa ny fanakekezana ny
vahoaka, ny fametrahana fandriampahalemana maharitra miompana bebe
kokoa amin’ny fihariana mankany amin’ny fampandrosoana.
Lohalaharana, araka ny napetraky ny fanjakana rahateo, ny
L’article Fiarovam-pirenena: nanao dinikasa ny minisitera a été récupéré chez Newsmada.
Nitory ny kaominina an’Antananarivo Renivohitra (CUA) teny amin’ny fitsarana misahana ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana ny mpikarakara ny hetsika ara-barotra « Le Zoma de Tana ». Sanganehana ny mpikarakara satria iray andro mialoha ny hanaovana ny foara natokana ho an’ny fetin’ny reny, saika natao teo amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely ny 22 ka hatramin’ny 25 mey 2019 vao naharay ny taratasy avy any amin’ny talen’ny kabinetran’ny kaominina fa tsy mahazo mampiasa ny toerana ry zareo. Nambaran’ny mpisolovavan’ny mpikarakara, Aliarivelo Maromanana fa efa nandoa volabe 22 tapitrisa tamin’ny kaominina ny mpikarakara mba ho famandrihana ny toerana sy ho an’ny hetra. Efa iray volana ny olona arovany no nanomana ny hetsika ary efa nandany volabe ny tamin’ny fandefasana ny dokam-barotra sy ny fikarakarana rehetra. Mpandray anjara 159 no tokony hivarotra mandritra hetsika karakarain’ny Le Zoma de Tana ho an’ny fetin’ny reny ary efa nandoa ampaham-bola amin’ny hofany ny trano heva, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny Le Zoma de Tana, Rakotoharijaona Andriamahefa. Na ireo mpivarotra efa namandrika trano heva aza gaga rehefa tonga teo amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely fa hetsika ara-barotra karakarain’ny kaominina no teo fa tsy Le Zoma de Tana. Araka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana misahana ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana dia miato ny ny fanapahan-kevitry ny tale kabinetra ary manan-kery ny fahazoan-dalana azonay tany aloha hampiasa ny Lapan’ny tanana, hoy ny mpisolovava Aliarivelo Maromanana. Tonga tao amin’ny kaominina anefa ry zareo mpikarakara niaraka tamin’ny vadintany nampahafantatra io fanapahan-kevitra io saingy tsy nety nandray azy ireo ny tale kabinetra sy ireo sampandraharaha hafa tao amin’ny kaominina. «Ao anatin’ny fandikàn-dalàna tanteraka ny kaominina ka handray fanapahan-kevitra hafa izahay mba ahafahanay mitantana ny hetsika ao amin’ny Parvis », hoy izy. Ho taterina eto ny tohiny ny raharaha. Lynda A/ Nirina R. Cet article LE ZOMA DE TANA: Nivadika ny kaominina Antananarivo Renivohitra est apparu en premier sur déliremadagascar.
Tsenan’Anosibe: mpangarom-paosy roa lahy tratra
Na eo aza ny ady amin’ny Covid-19, ady goavana atrehin’ny mpitandro filaminana koa ny ady amin’ny jiolahy sy ny tontakely ary saika ho isan’andro izany, manerana ny renivohitra. Raha ny zava-nisy, omaly, teny amin’ny tsenan’Anosibe, mpangarom-paosy roa lahy no tratra teo am-panaovana ny asa ratsiny. Ireo polisy manao fisafoana momba ny hamehana ara-pahasalamana no nahatsikaritra ny asa ratsy nataon’ireto jiolahy ireto ka niroso tamin’ny fisamborana avy hatrany. Misy rahateo ny fisafoana matetika ataon’ny polisy amin’iny faritra iny ka tamin’izany no nahafahana nisambotra ireto tontakely ireto. Nanamafy hatrany ny polisy fa mandritra izao fihibohana izao, tsy sasatra izy ireo ny mamerina ireo laharana telefaonina finday sy an-tarobia hahazoana ny polisy, hanampy ny olom-pirenena tsirairay avy, raha misy trangana tsy fandriampahalemana eny anivon’ny fiarahamonina eny. Ireto àry ireo laharana telefaonina nomen’ny polisim-pirenena 034 05 531 20 sy ny 020 22 281 70. Nentin’ny polisy hanaovana fanadihadiana ireo jiolahy tratra teny Anosibe ireto. Faritra isan’ireo ifamezivezen’olona maro rahateo ny eny Anosibe ka mampirongatra ny harom-paosy sy ny sinto-mahery.Jean ClaudeL’article Tsenan’Anosibe: mpangarom-paosy roa lahy tratra a été récupéré chez Newsmada.
Nicolas Dupuis – « Club des partenaires »: vonona hiara-hiasa sy hifanohana hatrany
Nanambara ny mpanazatran’ny ekipam-pirenena, i Nicolas Dupuis, omaly, nandritra ny fihaonana tamin’ireo mpanohana ao anatin’ny “club des partenaires”, fa isan’ny nahazoan’ny Bareo ireny vokatra tsara ireny ny fanohanan’ireo mpanohana marobe nanohana fitaovana sy vola ary moraly. Nanatanteraka valandresaka ho an’ny mpanao gazety, niaraka tamin’ny « clubs des partenaires » izy, omaly, tetsy amin’ny Toit de Tanà Carlton Anosy ary nilaza fa vonona ny hanohy hatrany ny fiaraha-miasa amin’ireo mpanohana, tarihin’ny orinasa Telma, mpanohana manatantara ny baolina kitra malagasy sy ireo orinasa maro, ny Canal +, ny BNI, ny Jovena, ny Star, ny Leader Price ary ny maro hafa. Tetsy ankilany, naneho izay fahavononany hanosika ny ekipa malagasy sy ny fanatanjahantena malagasy izay ihany koa ireo mpanohana ireo.Isan’ny nitondran’i Nicolas Dupuis fanazavana ihany koa ny mahakasika ny fanavaozana ny fiaraha-miasa amin’ny maha mpanazatra azy ny Barean’i Madagasikara. Nisy, hoy izy, ny fihaonana tamin’ny fitondram-panjakana malagasy ka nohalavaina ho efa-taona indray ny fifanaraham-piaraha-miasa. Mbola vonona izy hanome ny tsara kokoa hatrany ary nankasitrahany ny fanohanana ny ekipam-pirenena malagasy. Mi.RazL’article Nicolas Dupuis – « Club des partenaires »: vonona hiara-hiasa sy hifanohana hatrany a été récupéré chez Newsmada.
Fiatrehana ny fifidianana: hanohana an-dRajoelina ny Leader Fanilo sy ben’ny Tanàna 1000
Manao tohivakana. Nisesy ny fanambarana fanohanana ny kandidà Rajoelina amin’izao hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Anisan’izany ny eo anivon’ny Leader Fanilo sy ireo ben’ny Tanàna. Nanapa-kevitra ny birao nasionalin’ny Leader Fanilo, nivory ny asabotsy teo fa hanohana ny kandidà Rajoelina. “Entanina ny mpikambana manerana ny Nosy hanao ny ezaka rehetra hampandaniana ny kandidà laharana faha-13”, hoy izy ireo. Nentanin’izy ireo koa ny mpikambana hametraka fitokisana amin’ny kandidà Rajoelina. Nialohavan’ny dinika sy famakafakana ny raharaham-pirenena izany. Teo koa ny nihainoana ny vinan’ny kandidà roa hiatrika ny fihodinana faharoa. Nohamafisin’ity antoko naorin-dRazafimahaleo Herizo ity fa mametraka ho ambony ny fampandrosoana mitsinjo vahoaka eny ifotony ny foto-kevitra ijoroan’izy ireo. Ben’ny Tanàna anarivony… Mifototra amin’ny firaisankinam-pirenena, ady amin’ny fahantrana, tsy fandriampahalemana, fitsinjaram-pahefana tena izy, fanjakana tsara tantana , ady amin’ny kolikoly. Fanaovana ho lohalaharana ny tanora sy ny vehivavy. Etsy andaniny, nanao fanambarana koa ny Fikambanan’ny ben’ny Tanàna miara-dia amin-dRajoelina (Fibemiar) avy amin’ny faritra 22, tetsy Andavamamba, omaly. Nambaran’izy ireo tamin’ny izany fa resy lahatra amin’ny vinan’ny kandidà laharana faha-13 izy 585 mianadahy mianaka nisolo tena ireo ben’ny Tanàna anarivony, manohana ny mpanorina ny IEM. “Maty paika ny azy ny vina ary mamaly ny filan’ny vahoaka, eo amin’ny fandriampahalemana, ny sosialim-bahoaka…. Tsy hivadika ary manatanteraka ny ambarany”, hoy izy ireo. Randria L’article Fiatrehana ny fifidianana: hanohana an-dRajoelina ny Leader Fanilo sy ben’ny Tanàna 1000 a été récupéré chez Newsmada.
« Masque oxygène à haute concentration » 500 isa avy amin’ny « Groupe FILATEX ».
MITOHY NY ADY AMIN’NY « COVID-19 » : « Masque oxygène à haute concentration » 500 isa avy amin’ny « Groupe FILATEX ». Androany maraina dia tonga nanolotra fanampiana hanatsaràna ny ady amin’ny « Covid-19 » ny avy eo anivon’ny « Groupe FILATEX ». « Masque oxygène à haute concentration » 500 isa no natolotr’izy ireo ho an’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka. Tsara ny manamarika fa mahatratra hatrany amin’ny 12 litatra ka hatramin’ny 15 litatra isa-minitra ny fatra-na « oxygène » azo amin’ny fampiasana ireo « masque » ireo izay manampy betsaka tokoa amin’ny fitsaboana sy fandraisana an-tanana ireo mararin’ny « COVID-19 » maneho fahaseporana na tranga misy fahasarotana. Andriamatoa Minisitra no nandray tamin’ny fomba ôfisialy ireo tolo-tanana ireo ary nisaotra sy nankasitraka ny « Groupe FILATEX » izy amin’izao ezaka lehibe fanampiana ny mpiray tanindrazana izao. Na dia hita ary fa mihatsara ny vokatra ho antsika eto Madagasikara, dia manentana antsika hatrany izy hitandro mandrakariva ireo fihetsika sy fepetra napetraka rehetra hanakanana ny fihanaky ny valanaretina. Mihezaka hatrany ny fitondram-panjakana sy ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ahafahana mandresy ity areti-mandoza nampitondra takaitra ny firenena maro manerana an’izao tontolo izao ity. Anisan’izany ny fiaraha-mientana amin’ireo orinasa sy sampan’asa tsy miankina eto amintsika na avy any ivelany. Nomarihany ihany koa misokatra amin’ny fiarahamiasa ankolafy rehetra ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka amin’izao ady ataontsika handresena ny « Covid-19 » izao. Vonona ny mpiasan’ny Fahasalamana ary tsy andraraka ilo mby an-doha araka ny nambaran’ Andriamatoa Minisitra hatrany. Fanadihadiana : SCM/MSANP L’article « Masque oxygène à haute concentration » 500 isa avy amin’ny « Groupe FILATEX ». a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Mahatsiaro iharan’ny antsojay ny mpiasan’ny ACM
Velon-taraina noho ny antsojay mihatra aminy ny sasany amin’ireo mpiasa eo anivon’ny Aviation civile de Madagascar – ACM. Anisan’izany ny kiantranoantrano ataon’ny mpitantana, ny fanaovana halako bika tsy tiako tarehy amin’ireo mpiasa tsy mba namana, araka ny fampitam-baovaon’izy ireo. Efa nisy tompon’andraikitra ambony iray nesorina tamin’ny toerany noho ny tranga tahaka izao nefa naverina amin’ny toerany na tsy nahafeno ny fepetra fifaninanana aza. Anisan’izany ny fe-potoana niasana teo anivon’ny ACM. Nitohy tamin’ny fanilihana ireo mpiasa tsy namana izany raha nafindra toerana ny sasany ary nampidinina laharana ny hafa. Tao ireo tsy nanaiky ka nitondra ny raharaha teny anivon’ny «Inspection de travail » na teny anivon’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana. Niato ny fandraisana fanapahan-kevitra noho ny fihibohana nefa niverina indray ny antsojay.Maromaro ireo raharaha niakatra…Terena haka fialan-tsasatra ny mpiasa kanefa tsy maintsy ifaneken’ny andaniny, mpampiasa, sy ny ankilany, mpiasa, io. Notendrena avy hatrany anefa ny hisolo ny sasany amin’izy ireny. Efa maromaro ireo raharaha niakatra eny amin’ny « Inspection de travail » sy any amin’ny sampandraharaha hafa, manoloana izany. « Tsy manda ny fanovana na ny fanavaozana izahay fa tsy ekena kosa ny fanaovana izany ho fitaovana hanilihana ny hafa. Tsy misy antony tokony hamindrana na hanilihana na hanendrena mpiasa hisahana andraikitra iray raha tsy amin’ny alalan’ny fahaiza-manaony irery ihany », hoy ireo mpiasa.Manoloana izany, nanao antso avo izy ireo ny hampitsaharana izao tranga izao ary ny mba hijeren’ny tomponandraikitra mahefa ity “afindrafindrao”, mody ialokalofana amin’ny fanovana sy ny fanavaozana, ity ary hanararaotana ny hamehana ara-pahasalamana. Manahy hatramin’ny fandraisana sidina avy any ivelany hanomboka ny 1 oktobra ho avy izao ho an’ny any Nosy Be ireo mpiasa raha tsy matotra ny fomba fiasa sy ny fitantanan’ny ACM.Synèse R. L’article Mahatsiaro iharan’ny antsojay ny mpiasan’ny ACM a été récupéré chez Newsmada.
Ekipam-pirenena Robotika: nitsidika ny ozinin’ny Eau Vive Andranovelona
Mitohy ny lalana, ary miakatra hatrany ny laharan’ny ekipam-pirenena malagasy Robotika. Efa maro ireo fanamby notakina amin’izy ireo, ary tontosany soa aman-tsara avokoa nandritra izay fotoana lavalava nisian’ny fifaninanana “First Global Challenge 2020” izay. Hiatrika ny fanamby faha-25 sady farany ireto tanora manampahaizana ireto, ka naka aingam-panahy tamin’ny fitsidihana ozinina. Nandray azy ireo ny ekipan’ny Star, tany amin’ny ozinin’ny Eau Vive any Andranovelona, omaly. Nijery mivantana ireo milina miasa ao amin’ny ozinina, hananan’izy ireo hevitra amin’ny fanamby farany hatrehiny. “Mahafaly ny ekipan’ny Star ary reharehan’ny rehetra ny dingana vitan’ny ekipam-pirenena Robotika. Efa ao anatin’ny dimy voalohany maneran-tany, ary tohanantsika hatrany mba samy hanakatra ny kintana izy ireo”, hoy ny nambaran-dRandriambolamanana Seheno, tompon’andraikitra voalohan’ny serasera ao amin’ny Star. “Misaotra manokana ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny serasera izahay, izay nandray an-tanana anay nandritra ny fifaninanana ary nanohana hatrany. Misaotra ny Star koa noho ny fandraisan’izy ireo teto amin’ny ozinina fa misy azo entina miatrika ny dingana farany izany”, hoy ny nambaran’ny mpikambana iray ao amin’ny ekipa. Tsiahivina fa fifaninanana iraisam-pirenena mahakasika ny Robotika ny “First Global Challenge”. Ho an’ireo tanora mpianatra, 14 hatramin’ny 18 taona, izany ka manana fitiavana manokana amin’ny fikarohana. Tsy mena-mitaha amin’ireo ekipan’ny firenen-kafa ny ekipa malagasy hatramin’izay. Mbola mahavelombolo ihany koa ity ekipa amin’izao ity.Zo ny AinaL’article Ekipam-pirenena Robotika: nitsidika ny ozinin’ny Eau Vive Andranovelona a été récupéré chez Newsmada.
Faritra Matsiatra Ambony – ORN: “Tena olana ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka”
Ho fanatanterahana ny fanekena noraisin’ny mpitondra isan-tsokajiny ao amin’ny faritra Matsiatra Ambony momba ny ady ho an’ny fanjarian-tsakafo, hamoaka didim-panjakana ny prefet ao amin’ny faritra fa hiantsorohan’ny sefo fokontany 826 ao anatin’ny faritra ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Hanome fanampiana amin’ny fanorenana ireo toby fanomezan-tsakafo ho an ‘ny zaza ny kaominina ary andraikitry ny faritra ny manohana ireo hetsika rehetra ataon’ny Hina sampana Matsiatra Ambony amin’ny fandraisana an-tanana izay anjara biriky vitany.Tontosa, ny faran’ny herinandro teo, ny fihaonana tamin’ireo mpitondra isan’ambaratongany eo Matsiatra Ambony sy ny mpikambana ao amin’ny Hina. Vonona hiara-miasa amin’ny Hina ireo mpitondra hampidina ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo ao anatin’ny faritra.Manana taha faharoa 53,7% ny faritra ho an’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka, araka ny fanadihadiana MICS 2018 izay nihena raha ampitahana tamin’ny fanadihadiana EDS 2012 nanome taha 65%. Io tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka io no tena olan’ny faritra, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny Ofisim-paritra momba ny fanjarian-tsakafo (ORN) miahy ny faritra. 737 ny toby PNNC miasa amin’izao fotoana izao mikarakara ireo zaza madinika. Anisan’ny nisitraka ny tetikasa Fanjarian-tsakafo sy Fahasalamana ifotony (Fafi) hampihenana ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ho 38%. Tanjona ny hampitombo ny fampiasana ireo tolotra ho an’ny fananahana ara-pahasalamana sy fahasalamana ara-tsakafon’ny reny sy ny zaza. Fokontany 737 amin’ny 826 no hiantefany mivantana ary miditra amin’ny andiany faharoa ny tetikasa ankehitriny.Mpiray ombona antoka amin’ny Ofisim-paritra momba ny fanjarian-tsakafo ny mpikambana rehetra ao amin’ny Hina. Miasa amin’ny fandraisana an-tanana ny zaza avokoa izy ireo, araka ny fanamarihan’ny mpandrindra voalohany, i Vatosoa.VonjyL’article Faritra Matsiatra Ambony – ORN: “Tena olana ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka” a été récupéré chez Newsmada.
Kitra Eoropeanina: nibata amboara efatra be izao ny Bayern de Munich
Nahazo amboara efatra. Tontosa ny alakamisy lasa teo, tao amin’ny kianja Puskas Arena Budapest, ao Hongrie ny fiadiana ny “Super coupe de l’UEFA”, taranja baolina kitra. Fihaonana nikatrohan’ny Bayern de Munich, tompondakan’i Eoropa sy ny FC Séville, tompon’ny amboara. Lasan’ny ekipan-dRainiboto ny amboara rehefa nandresy an-dry zareo Espaniola, tamin’ny isa tery 2 no ho 1. Efa tany amin’ny fanalavam-potoana vao tafavoaka ho mpandresy ny Bayern de Munich, tamin’ity. Ry zareo Seville no nanokatra ny isa, tamin’ny alalan’ny “penalty” matin’i Lucas Ocampos, teo amin’ny minitra faha-13. Nosahalain’i Leon Goretzka, kosa izany teo amin’ny minitra faha-34. Nifandimbiasana avy eo ny fanafihana, saingy tsy nisy ny baolina tafiditra, hatreo amin’ny fiafaran’ny fe-potoana ara-dalàna.Fandresena faha-26 nanomboka ny volana desambraVoatery niditra tamin’ny fanalavam-potoana ny roa tonta. Tany amin’ny minitra faha-104 no nahatafiditra ny baolina nitondra ny fandresena ho azy ireo i Javi Martinez.Fanindroany no nandrombahan’ny Bayern de Munich ny amboaran’ny “super coupe de l’UEFA”. Fandresena faha-26 azon’izy ireo kosa ity vitany ity, nanomboka ny volana desambra 2019 no ho mankaty. Tsy mbola tojo faharesena mihitsy izany ny Bayern de Munich, hatreto raha iray monja ny ady sahala, tao anatin’izany.Tsiahivina fa efa nahazo ny tompondaka sy ny fiadiana ny amboara any Allemagne izy ireo. Nibata ny ny “UEFA Champions League” farany teo ary izao nahazo ny “UEFA Super coupe” izao. Andrasana koa ny 30 septambra izao ny “super coupe” any Allemagne, hifandonany amin’i Dortmund. Ho avy koa ny “coupe du monde des clubs » amin’ny desambra izao, andraisan-dry Neuer anjara.TompondakaL’article Kitra Eoropeanina: nibata amboara efatra be izao ny Bayern de Munich a été récupéré chez Newsmada.
Banky ho an’ny fampandrosoana: “Adidy lehibe ho an’ny fanjakana”, hoy ny Crem
« Tokony hanangana banky ho an’ny fampandrosoana ny fanjakana na misy Covid na tsy misy satria ilaina izany ho an’ny fampiasam-bola eto Madagasikara », hoy Rakotoarisoa Andriatahina, sekretera jeneralin’ny Crem*. Nandroso io hevitra io ireo mpahay toekarena ao amin’ny Crem satria banky manao varotra fotsiny ny banky misy eto amintsika. “Ny vahiny tompon’ny banky eto, mody any aminy ny tombom-barotra azony fa tsy miasa eto”, hoy hatrany ny ao amin’ny Crem.Misy eto ny IMF na ireny mpampindram-bola madinika ireny, ho an’ny asa fampiasam-bola hanaovan’izay mpindrana ny tetikasany, saingy mbola ambony loatra ny tahan’ny zana-bola. Sakana ho an’ny fampiasam-bola ny io taha ambony io, ankoatra ny antoka takina. Betsaka anefa ny Malagasy manana tetikasa tsy mahita vola ampiasaina tsy ahafahana mandray anjara amin’ny toekarena.Koa adidy lehibe ho an’ny fanjakana ny fananganana io banky ho an’ny fampandrosoana io, ahafahana mampiasa vola, araka ny fanazavan’ny Crem. Manam-bola ho an’izany ny fanjakana raha manam-piniavana. Azo atao koa ny mamorona vola ho an’izany banky izany, izay tsy atahorana hiteraka fiakaran’ny vidim-piainana noho ilay vola avy hatrany dia mihodina, miasa ho an’ny tetikasa samihafa.Izany akory tsy homena fotsiny amin’izao fa tsy maintsy misy ny fanaraha-maso momba ny fampiasana ilay vola, indrindra any amin’ny tontolo ambanivohitra sy izay tetikasa mamokatra rehetra, fa tsy mivarotra fotsiny. Tetikasa lavitra ezaka miteraka fampandrosoana maharitra, raha ny fanazavan’ireo mpahay toekarena. R.Mathieu Crem * : Cercle de réflexion des économistes de MadagascarL’article Banky ho an’ny fampandrosoana: “Adidy lehibe ho an’ny fanjakana”, hoy ny Crem a été récupéré chez Newsmada.